Dareemaha Shuban Biyaha Cagaaran (855-19-6) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / Daawada Clostebol Acetate (Turinabol)
SKU: 855-19-6. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka qiyaasta budada Clostebol Acetate (Turinabol) (855-19-6), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Gawaarida Acetate (Turinabol) video budada ah
Daawada Clostebol Acetate (Turinabol) characters
Name: Daawada Clostebol Acetate (Turinabol)
Formula kelli: C21H29ClO3
Miisaankani waa: 364.91
Dhibcaha Biyaha: 112-116 ℃
Daawada Clostebol Acetate (Turinabol) isticmaalka wareegga steroids
Caanaha Turinabol Noocyo
Clostebol copolymer (Turinabol) budada (CAS 855-19-6), magaca 4-chlorotestosterone, sidoo kale magacyada brand Tbol, Macrobin, Steranabol, Alfa-Trofodermin, Megagrisevit.
Turinabol (Chlorodehydromethyltestosterone, oo sidoo kale loo yaqaan 'Tbol' iyo Oral Turinabol) ayaa dhab ahaantii ah qaabka wax laga beddelay ee Dianabol (Methandrostenolone), taas oo dhab ahaantii isku xirta kiimikada Dianabol iyo Clostebol (4-chlorotestosterone). Sidaa darteed tani waa sababta magaca kiimikada dhabta ah waa 4-chlorodehydromethyltestosterone. Isbedelka qaab dhismeedka kiimikada ayaa u oggolaanaya in aan la sifeynin iyo sidoo kale inuu helo qiimeyn aad u hooseeya oo astaamo ah, taasoo macquul ah sababta Turinabol loo naqshadeeyey 'Dianabol fudud'.
Isticmaalka budada kuleylka loo yaqaan "Acetate Acetate Acetate"
Turinabol wuxuu leeyahay qiyaasta hoose ee xinjirta ah ee 6 iyo qiimeynta awoodda anaboleed ee 53, tani waxay u dhowdahay inay ku dhawaato marka la eego isbarbardhigga saameynaha iyo guulaha. Sababtoo ah sida qiimeyn hooseeya ee orrogen, finanka, gardarrada, xanaaq badan iyo xoogga korodhku waa mid dhif ah, laakiin aan ahayn mid aan jirin. Marka la barbardhigo hormoonka waalidiinta Dianabol, waa anabolic oo daciif ah oo jirka ah ma aragto oral Tawl sida wakiilka iibsashada mass.
Turinabol wuxuu ku dhawaad ​​kala badh qiimeynta anabolic Testosterone, sidaas daraadeed qiyaasta 40-60mg maalin kasta waxaa lagula talinayaa hordhac. Qaadooyinka Turinabol waxay ka badan karaan 80-100mg maalin kasta, laakiin jir-dhiseyaalku waxay soo sheegaan waxyeelooyinka soo kordhaya, halka guul-darradu sii socoto.
Sababtoo ah kala soociddeeda kala duwan ee asrogenic ee saamaynta anabolic, waa steroid daciif ka yar tahay hormoonka waalidka Dianabol. Si kastaba ha noqotee, hubinta Tbol waa in uu leeyahay awood dhisme kasta oo muuqda, wuxuu soo bandhigi doonaa waxoogaa yar ee saameynta istrogen-ka iyo gabi ahaanba wax saameyn ah estrogenic (sababtoo ah awood la'aanta in lagu arooro Estrogen). Sababtoo ah xooggeeda awoodda u liita marka laga reebo Dianabol, qiyaasaha loo baahan yahay in laga helo waxyeellada Tbol ayaa loo tixgeliyaa inay tahay mid aad u sareysa (tan waxaa lagu sharxi doonaa gaaban qaybta Tbal doses ee profile).
Guud ahaan, cayaartoyda iyo jir-dhiseyaashu waxay filan karaan guulo aan fiicnayn oo aan fiicneyn oo aan halis u aheyn waxyeelleyn, gino, ama waxyeelo kale oo loo yaqaan 'estrogenic'. Horumarka xoogga iyo xoogga ah lama ogaanayo in uu yahay mid culus sababtoo ah la'aanta awoodda anabolic, laakiin guulaha cirka iyo firfircoonida oo si joogta ah u koraya ayaa la filayaa. Waxa kale oo loo isticmaalaa sida wakiilka jarjaran ee mudada gaaban inta lagu jiro wakhtiyada luminta dufanka ama diyaargarowga kahor-tartanka sababtoo ah iyada oo aan la awoodin in lagu beddelo Estrogen. Awoodda Turinabol waxay dhab ahaantii iftiimisaa sidii loogu talagalay stabdhabyada kale ee anabolic marka ay la socoto (lagu xakameynayo) steroids kale taas oo ay sabab u tahay awooddeeda ay ugu xirnayd SHBG. Xayiraadda ShBG waxay u oggolaaneysaa in badan oo ka mid ah steroids kale oo lagu xakameyn karo si ay u noqoto shaqadooda, iyada oo aan laysku hallayn karin SHBG, taas oo ah faa'iido kale oo ay soo bandhigto.
Digniin ku saabsan budada Turinabol
Arjiga muddada dheer wuxuu keeni karaa sodium, haynta biyaha, sidaas awgeed xajinta soodhiyeynta ee ay keento bararka bukaanka. Cudurka beerka, dhiig-karka, bararka, bukaanka kansarka qanjirka 'prostate' iyo haweenka uurka leh iska ilaali isticmaalka. Isticmaalka muddada dheer wuxuu dhalin karaa haweenka maskaxda yar.
Shukulaatada caanaha ah ee loo yaqaan 'Clostebol Acetate'
Clostebol waa AAS daciif ah oo adeegsan kara isticmaalka daroogada sii koraysa. Hadda waxaa mamnuucay Hay'adda Caalamiga ah ee La-Dagaalanka Doping. Oral Turinabol, oo isku dhafan qaababka kiimikada clustebol iyo methandienone, ayaa si ballaaran loogu isticmaalay barnaamijka doping-ka ee gobolka maaliyada Jarmalka.
Inta lagu jiro mudada dheer ee testosterone, tusaale ahaan, iyadoo la adeegsanayo tijaabada baaritaanka Enhanthate ee toddobaadka 12, afka ah waxaa loo soo bandhigaa toddobaadka ugu horeeya ee 4-6 halka "Testosterone" uu "kudoonayo". Tani waa erey loo isticmaalo marka heerarka heerarka dhiigga ee xasilooni ay yihiin heerkooda ugu sarreeya iyo guulaha muruqyada iyo muruqyada borotiinka ayaa ah kan ugu sarreeya.
Turinabol wuxuu soo saari karaa muruqyo xoog badan iyo murqo dheer. Sidaa daraadeed cayaartu isticmaashaa ma filaneyso in ay si dhakhso ah u hesho xoog, muruq iyo miisaan. Waa "steroid anabolic" muddo dheer ".
Waad ku mahadsan tahay qadarkeeda yar, waxaa si dhaqso ah u soocaya jirka, taas oo markaa ka dhigeysa in dheef-shiid kiimikaad ay kaadidaan kaadida. Baadhitaanada ka hortagga doping badanaa ma yaqaanaan Turinabol haddii cayaartu ay joojiso daaweynta maalmaha 5 ka hor tartanka.
Turinabol ma keenayso biyo qabidda sababtoo ah dheelitirka biyaha iyo macaadiinta. Waa runtii in ka yar iyo kuwa ka soo jeeda marka loo eego kuwa kale ee anabolics sida Dianabol. Tani waxay sidoo kale u sahlan haweenka inay si fudud u isticmaalaan, inkasta oo ay tahay inay ka taxadaraan in aan ka badnayn dhererka daaweynta loo qoray.
Ugu dambeyntii, badalashada koloriin ayaa ka hortageysa isdhexgalka aromatase. Sidaa darteed waxaa jira halis yar oo ah ginecomastia ama isbedelka DHT.
Gebogebo, Turinabol waa steroid aad u fiican oo lagu diyaarinayo jirkaaga "dabiici ahaan". Awoodda lagu dhisayo muruqyada oo dhan waxay ka dhigan tahay in ciyaartoy badani ay sidoo kale u isticmaalaan inta lagu jiro nasashada nasashada. Tani waxay u oggolaaneysaa inay diyaar u noqdaan oo ay xoojiyaan murqaha iyaga oo aan helin mass.
Nooca Dareemka Cawada (Acetate) (CAS 855-19-6)
Nolosha Nolosha: Saacadaha 16
Waqtiga Qaadashada: 11 - 12 bilood
Qiimeynta Anabolic: 54
Qiyaasta Androgenic: 6
Suuq-geynta Shirkadda Cawaaqi-qaadka ee Acetate Sale
Sidee loo iibsadaa budada loo yaqaan "Clostebol Acetate" (CAS 855-19-6): iibso budada Turinabol ee AASraw
AASraw waxay bixisaa nadiif ah 99% Daawad Dareemis ah Acetate budad ah oo loogu talagalay jirka jirka ama sheyaalka dhulka hoostiisa.
Cuntada loo yaqaan "Clostebol Acetate" (Turinabol) Rootiga: